I-Petkit Pura X, ibhokisi likadoti lekati lakho elihlakaniphile futhi elizihlanzayo | Izindaba zegajethi
I-Petkit Pura X, ibhokisi likadoti lekati lakho elihlakaniphile futhi elizihlanzayo
UMiguel Hernandez | 13/12/2021 14:00 | Kubuyekezwe ku- 15/12/2021 13:00 | General, Izibuyekezo
Uma unekati, uyazi ukuthi udoti ungaphenduka iphupho elibi langempela, uma unamabili noma ngaphezulu, ngeke ngikutshele lutho. Kodwa-ke, usuyazi kakade ukuthi kwa-Actualidad Gadget sihlala sinezinye izindlela ezingcono kakhulu zasekhaya ezixhumene ukuze senze ukuphila kube lula kuwe kanye nezilwane zakho ezifuywayo ozithandayo.
Sibheka i-Petkit Pura X, ibhokisi likadoti elihlakaniphile elizihlanzayo futhi elinezici eziningi ezimangalisayo. Zitholele nathi ukuthi ungavalelisa kanjani emsebenzini oyisicefe wokuhlanza ibhokisi likadoti likakati, nobabili nizolithokozela, nizozuza empilweni futhi nakanjani ngokuhamba kwesikhathi.
1 Izinto zokwakha nokuklama
2 Imisebenzi emikhulu
3 Izilungiselelo nezindlela zokusebenzisana nebhokisi lesihlabathi
4 Umbono woMhleli
Izinto zokwakha nokuklama
Sibhekene nephakethe elikhulu, kunalokho ngingasho ukuthi likhulu kakhulu. Kude nalokho ongakucabanga ukuthi yibhokisi lesihlabathi, ubukhulu bukhulu impela, sinomkhiqizo olinganisa amamilimitha angama-646x504x532, okungukuthi, cishe uphakeme njengomshini wokuwasha, ngakho-ke ngeke sikwazi ukuwubeka ngokunembile kunoma yiliphi ikhona.. Kodwa-ke, umklamo wayo uyahambisana nayo, yakhiwe ngepulasitiki ye-ABS ngaphandle emhlophe, ngaphandle kwendawo engezansi, empunga ekhanyayo, lapho kuzotholakala khona i-stool deposit.
Iphunga eliqeda uketshezi
Iphakethe lesikhwama sikadoti
Phezulu sinesivalo esimise kancane esingathi sijike lapho singashiya khona izinto, ngaphambili kunesikrini esincane se-LED esizosibonisa ulwazi, kanye nezinkinobho ezimbili kuphela zokusebenzisana. Ngaphezu kwalokho, leli phakethe lihlanganisa umata omncane ozosivumela ukuba siqoqe iminonjana yesihlabathi ikati elingase liyisuse, into eyaziswa kakhulu. Isisindo esiphelele somkhiqizo si-4,5Kg ngakho-ke awulula kakhulu futhi. Sinesiphetho esihle kanye nomklamo othakazelisayo, obukeka kahle kakhulu ngisho nakunoma yiliphi igumbi, ngoba njengoba sizobona ngezansi, ukubulawa kwayo kuhle kangangokuthi ngeke sibe nezinkinga kulokho.
Ibhokisi likadoti linesistimu yokuhlanza esekelwe, uma sibheka ingaphakathi layo, esigubhu (lapho udoti wekati uzotholakala khona nalapho uzozikhulula khona). Uhlelo lokuhlanza luyinkimbinkimbi, ngakho-ke ngeke sigxile emininingwaneni yezobuchwepheshe nobunjiniyela, kodwa kunalokho emiphumeleni yokugcina esinikezwa yi-Petkit Pura X, futhi kulesi sigaba sijabule kakhulu ngokuhlolwa okwenziwe.
Akufanele sikhathazeke ngokuthi inomshini wokusebenza, ngoba ibhokisi lesihlabathi linohlelo lokuhlanza oluzenzakalelayo okufanele sililungise ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza, noma kunjalo, linezinzwa ezihlukahlukene, isisindo nokunyakaza, okuzovimbela i-Pura Petkit X. ukusebenza kungakhathaliseki ukuthi i-jack iseduze kakhulu noma ingaphakathi. Kulesi sigaba, ukuphepha nokuthula kwenkabi yethu encane kuqinisekisiwe ngokugcwele.
Jack inlet ububanzi: 22 amasentimitha
Isisindo sedivayisi esifanele: Phakathi kuka-1,5 no-8 Kilogram
Umthamo omkhulu wesihlabathi: Phakathi kuka-5L no-7L
Amasistimu okuxhumana: 2,4GHz WiFi ne-Bluetooth
Kumele futhi kuqashelwe ukuthi iphakheji ihlanganisa uchungechunge lwezesekeli, lezi zingamathini amane we-liminator yephunga eliketshezi, kanye nephakheji lezikhwama zokuqoqa ukungcola. Nakuba isitsha sezihlalo sinosayizi ongavamile, angicabangi ukuthi kunenkinga enkulu kakhulu yokusebenzisa noma yiluphi uhlobo lwesikhwama sosayizi omncane, nokho, singakwazi ukuthenga izikhwama kanye eliminators iphunga ngokwehlukana ngentengo okuqukethwe ngempela kuwebhusayithi yePetkit. Yiqiniso, lezi zesekeli ziyatholakala futhi I-PETKIT igcwalisa kabusha....
Mayelana nezinsiza, ikhwalithi evamile yedivayisi kanye nazo zonke ezinye izinkimbinkimbi ze-Petkit Pura X, seneliseke impela, manje kuzodingeka sinikele ingxenye yonke kukho kokubili uhlelo lokusebenza nezinhlelo ezihlukahlukene zokuhlela kanye nebhokisi lesihlabathi elihlakaniphile izilungiselelo.
Izilungiselelo nezindlela zokusebenzisana nebhokisi lesihlabathi
Ukuyilungisa, kuzodingeka silande uhlelo lokusebenza I-Petkit iyatholakala kokubili Android ngokuqondene iOS ngokuphelele mahhala. Uma sesiyiqedile inqubo yokumisa nokubhalisa yohlelo, sizongena ukwengeza le divayisi okukhulunywa ngayo, sizocelwa ukuthi silandele imiyalo ngezinkinobho ze-Pura X, noma kunjalo, uma unemibuzo, thina sincoma Ungabona ividiyo esiyilayishile esiteshini sethu se-YouTube sihlaziya i-Pura X lapho sikubonisa khona inqubo yokumisa isinyathelo ngesinyathelo.
Uhlelo lokusebenza lisivumela ukuthi sigcine irekhodi elinemininingwane yezikhathi isilwane sethu esiya ngaso kubhokisi lesanti, kanye namashejuli azo okuhlanza, okuzenzakalelayo kanye nesandla. Futhi singayivala, siqhubeke nokuhlanza ngokushesha futhi sihlele nokususwa kwephunga ngokushesha. Kuzo zonke ezinye izinqumo singakwazi ukwenza i-«Smart Adjustment» nayo etholakala kuhlelo lokusebenza. Ngaphezu kwalokho, kulokhu kubhaliswa sizokwazi ukubona ukuhlukahluka kwesisindo sekati lethu.
Lesi sisindo sekati sizovezwa ngaso leso sikhathi esibukweni se Okumsulwa X, lokhu okusinika ulwazi mayelana nesimo sesihlabathi, ukuze kwaziswe uma kufanele sisiguqule, ngendlela efanayo ukuthi zonke izenzo ezihlinzekwe yisicelo nazo zingenziwa ngokuqondile ngesandla ngokusebenzisa izinkinobho ezimbili kuphela ezibonakalayo i-Petkit Pura X equkethe.
Ngaphandle kokungabaza, lokhu kubonakale kuwumkhiqizo othakazelisa kakhulu, ungawuthenga kuwo I-Powerplanet Online njengomsabalalisi osemthethweni womkhiqizo lapha e-Spain, noma ngezindlela zokungenisa kwamanye amawebhusayithi. Ngaphandle kokungabaza, kungenye indlela ebizayo, cishe ama-euro angama-499 kuye ngendawo ekhethiwe yokuthengisa, Kodwa ikakhulukazi uma sinekati elingaphezu kwelilodwa, lingasisindisa isikhathi esiningi, lisisize silondoloze inhlanzeko yekati neyekhaya lethu, ukuze libe umngane obalulekile ekuphileni kwethu kwansuku zonke. . Sikuhlaziyile, sikutshele mayelana nolwazi lwethu ngokujulile futhi manje kukuwe ukuthi unqume ukuthi kuyafaneleka yini noma cha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Petkit Pura X, ibhokisi likadoti lekati lakho elihlakaniphile futhi elizihlanzayo
Ukuqhathanisa kweselula: Doogee V10 vs Doogee V20
I-Sonos imemezela ukuhambisana ne-Amazon Music's Ultra HD kanye ne-Dolby atmos